Dagaal ka socda Deegaanka Halgan
Halgan(SONNA)–Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan ayay wararku sheegayaan in dagaal uu ka socdo Deegaanka, kadib markii Kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig Ciidamada Itoobiya ku lahaayeen goobtaasi.
War mar dhow ay heshay Wakaaladda Wararka Somaliyeed ee SONNA ayaa sheegaya in dagaalkaasi uu ka dambeeyay, kadib markii Kooxda Al-Shabaab ay weerar ismiidaamin ah ku qaadeen saldhiga Ciidamada Itoobiya, kadibna waxaa bilowday dagaal toos ah oo u dhaxeeya Ciidamada Itoobiya oo qeyb ka ah kuwa midowga Afrika iyo kooxda Alshabaab.
Dagaalka oo bilowday saaka salaaddii subax kadib, iyadoo Dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka maqlayaan goobtaasi dhawaaqa hubka culus oo la is weydaarsanayo, waxaana dagaalka uu xoogiisa ka socdaa duleedka Halgan, balse wararka qaar ayaa sheegaya in diyaaradaha qumaatiga u kaca Ciidamada Itoobiya ay ka qeyb qaadanayaan dagaalkaasi.
Deegaanka Halgan ayaa ku yaalla jidka laamiga ee u dhaxeeya Buulo Burde iyo Beledweyne, waxaana halkaasi muddo saldhig u aheyd Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM.
Wixii faahfaahin dheeri ah ee ku soo kordha kala soco SONNA.SO
Previous articleCiidamada Booliska G/Banaadir oo howlgalo ka sameeyay Muqdisho(SAWIRO)